Ikhosi yasimahla yeAutoCAD, efumanekayo ngokuKhuphela-iGeofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/I-AutoCAD Course Course, efumanekayo yokukhuphela
AutoCAD-AutoDeskUkulandaUkufundisa i-CAD / GISOkufumaneka
Ngethuba elidlulileyo sashicilele inguqulo yale Nkundla ye-AutoCAD yamahhala, ngoku ikhutshwe i-AutoCAD 2013, apho ungayilanda iqela lokuqala likhululekile kwaye yongezelela:
Ngoku ungayithenga ngokukhuphela!
Kutheni i-Free AutoCAD Course?
Ibizwa ngokuba yiKhosi ye-AutoCAD yasimahla kuba unokuyijonga kwi-Intanethi ngaphandle kwendleko. Ukukhuphela okanye ukuthumela ngeposi kuneendleko.
Ndawonye, ​​Z! Amatikiti kunye Guides abasebenze Inmediatas inguqulelo entsha ye Kakade AutoCAD 013, unako ukuthenga nge umxokozelo ngqo uhlobo buso okanye epheleleyo.
Imveliso xa ithengiweyo iqulethe iquka:
Gcwalisa i-AutoCAD 2013 2D kunye ne-3D ngaphezulu 450 iividiyo
Isiqulathi esilula lula kwizihloko zombuzo
Zonke umzekelo iifayile yekhosi
Eminye kwimidwebo ye-17,000 dwg iibhloko kunye nemizekelo ye-3D
Iphepha leencwadi ze-255 zedijithali ezinezahluko ze-40
Iindleko zokuthumela eziquka yakho endlwini, nakweliphi ilizwe eMelika naseYurophu
Unokuhlawula nge-PayPal, Ukutshintshwa kweBhanki okanye iKhadi leMatyala
Kuba inani lamavidiyo ahlaziyekileyo ngoku afika kwiiDVD ezimbini, eziqhutyelwa kwiWindows, ezihamba ngaphandle kokufakwa.
Yinyaniso kangaka. Umxholo khosi ibandakanya ngaphezu 450 iividiyo ukuba ungenza nkosi yonke into eyenza bobabini AutoCAD 2013 2 inkqubo umzekelo imilinganiselo 3D.
Zonke iividiyo zikwinkcazo ephezulu kwaye zibandakanya iaudiyo ngeSpanish kwaye ukuba sidibanisa inani leebhloko, ngokuqinisekileyo sisipho ngeli xabiso, sithathela ingqalelo ukuba enye yeendlela zibandakanya ukuthunyelwa emnyango wakho ngeposi.
Emva koko uluhlu lomxholo:
Icandelo Lokuqala: Iingcamango ezisisiseko ze-AutoCAD 2013
Isahluko 1: Yintoni i-AutoCAD?
Isahluko 2: Isikrini somfanekiso we-AutoCAD 2013
Isahluko 3: Units kunye noLawulo
Isahluko 4: Iimpawu zeempawu ezisiseko
Icandelo lesibini: Ukwakhiwa okulula kwezinto
Isahluko 5: IJometri yezinto ezisisiseko
Isahluko 6: Izinto ezibandakanyiweyo
Isahluko 7: Iipropati zezinto
Isahluko 8: Umbhalo
Icandelo lesithathu: Ukwakhiwa okuphambili kwezinto
Isahluko 9: Ukubhekisela kwizinto
Isahluko 10: Ukulandelwa kokulandelwa kwenjongo
Isahluko 11: I-Polar Tracking
Isahluko 12: Izikhawulelo zeParametric
Isahluko 13: Ukuhamba nge-2D
Isahluko 14: Jonga Ulawulo
Isahluko 15: I-Personal Coordinate System
Icandelo lesine: Inkcazelo elula yento
Isahluko 16: Izindlela zokukhetha
Isahluko 17: I-Simple Edition
Isahluko 18: I-Advanced Edition
Isahluko 19: AmaGrips
Isahluko 20: I-shading, i-gradients kunye neendlela
Isahluko 21: Iipalayini ezifanelekileyo
Icandelo lesihlanu: Umbutho wemidwebo
Isahluko 22: Iingqimba
Isahluko 23: Iibhloko
Isahluko 24: Iimpawu zokungaphandle
Isahluko 25: Iinkonzo kwimidwebo
Isahluko 26: Imibuzo
Icandelo lesithandathu: Ukukhangela
Isahluko 27 Dimension
Isahluko 28 CAD Imigangatho
Icandelo lesithoba: Ukubeka kunye nokupapashwa
Isahluko 29 Print Design
Isahluko 30 Ukuprinta
Isahluko 31 AutoCAD kunye ne-Intanethi
Isahluko 32 sokudweba
Icandelo lesesibhozo: Umzobo wesithathu
Isahluko 33 I-Modeling space 3D
Isahluko 34 SCP kwi-3D
Isahluko 35 Bonisa kwi-3D
Isahluko 36 Izinto 3D
Isahluko 37 Solids
Isahluko 38 Surfaces
Isahluko 39 Isondlo
Isahluko 40 Modeling
Ikhosi ihlawulwa ngokusebenzisa isevisi ekhuselekileyo ye-FastSpring, ukuqinisekisa ukuba inokuhlawulwa ngeendlela ezahlukeneyo ezifunwe ngabantu kunye nexabiso elifanayo lwemali yendawo.
Indlela yokuqala isebenzisa i-credit card okanye debit card.
Okwesibini i-akhawunti ye-PayPal
Ingxenye yesithathu ihamba ngokutshintshwa kwebhanki ye-ACH, kulabo abanegatsha le-intanethi. Akusebenzi kuwo onke amazwe.
Olu gqibela lugqithiselwa ngamazwe ngamazwe. Kule nto kufuneka ukhethe "I-Order Purchase", ukufumana kwi-imeyile idatha yebhanki yebhanki kunye nebhanki oyikhethile kwisixeko sakho.
Ukuphendula izicelo zabafundi, sibandakanyile, ukongeza kwimowudi yokuposa, iindlela ezimbini onokukhetha kuzo: Ukukhuphela umxholo weeDVD ezimbini nokukhuphela izahluko ezizodwa:
1 Ukukhuphela ngokuthe ngqo kwiCDs ezimbini.
Kuquka ii-disc, iibhloko kunye neefayili zokusebenzisa. US $ 29.99 Thenga ikhosi epheleleyo
2 Gcwalisa ikhosi ye-AutoCAD 2013, ithunyelwe ngeposi.
Kuthatha phakathi kwe-3 kunye nee-4 iiveki ukufika. Kuquka ii-disc, iibhloko kunye neefayili zokusebenzisa.US $ 34.99 Thenga ikhosi epheleleyo
3 Icandelo elincinane lekhosi ngokukhuphela.
Ukukhuphela ngokuthe ngqo ngecandelo. Akubandakanyi iibhloko okanye iifayile eziza kwikhosi epheleleyo, kuphela iividiyo kunye neenkcazo.
Icandelo lokuQala (Iingcamango ezisiseko)
US $ 4.99 Thenga ngoku
Icandelo lesibini (Ukwakhiwa okulula kwezinto)
Icandelo lesithathu (Ukwakhiwa okuphambili kwezinto)
Icandelo lesine (Uhlobo lwezinto)
Icandelo lesihlanu (Umbutho wemidwebo)
US $ 4.99Thenga ngoku
Icandelo lesithandathu (Ukulinganisa / Ukulinganiswa)
Icandelo lesithoba (Ukuprinta, ukuhlela kunye nokupapashwa)
Icandelo lesibhozo (Umzobo wesithathu)
4 Thenga amacandelo athile ngexesha elinye
Ukuthunyelwa kukuthumela ngeposi, ezithatha kwi-3 ukuya kwiiveki ze-5, kuxhomekeke kumgama; Ukuthunyelwa kweMexico kuyashiya iMexico, ngoko kungaphaya kweli lizwe kuthatha iveki nje. Sinika ikhowudi ukuyilandelela kwi-intanethi.
Ukuthunyelwa kwenziwa iintsuku ezimbini zokusebenza emva kokufumana intlawulo, kwaye oku kwenziwa nge-Guides Guides evela eMexico.
Unyuselo: Khuphela iCandelo lokuQala mahala.
Nangona bekunjalo kwisigaba sokuvavanya, ukuhlonipha iZatoca Classifieds, isahluko sokuqala seNkxaso iya kunikwa okwesikhashana kwaye kude kubekho ukukhushulwa kuphelile:
Kule nto, kufuneka uzalise ezi mfuno zilandelayo:
Yenza i-akhawunti yeGoogle Drayivu (Ngaphambili i-Google Docs)
Enyanisweni, ukuphakanyiswa kwithuba elincinane.
Okwangoku ukuthengwa kweli khosi akufumanekanga ukukhuphela mahala.
Inokujongwa kuphela kwi-Intanethi simahla
Ndicacisa ukuba oko kuthengiswayo akuyiyo inkqubo ye-AutoCAD, kodwa ikhosi.
Ngaphambi kokuba kuthengiswe ngeposi, kodwa ngoku kufumaneka kuphela ukukhuphela, kwiZatocaClasificados.
Maximo Echevarria uthi:
Ndizama ukuxhuma kunye neendawo zokugcina izakhiwo ukuze ulandele ikopi ye-AutoCAD 2013 OKUBA NDIBONA IMITHETHO OKANYE IINKCUKACHA ZINYE
NOKUTHANDA NDINCEDE UKUBA NDIYA KUFUNA KANYE NOKWENZA NGOKWENKQUBO KWENQAKU YE-2013 INKQUBO YAMAN. LUIS MANUELS GONZALEZ NAVA? kunye neyiphi inkokhelo yokuhlawula
Kunjalo Oko ukukhuphelayo, ukutshisa kwiDVD kuya kubakho okuthunyelwa kuwe ngeposi.
Ku lungile Ndingathanda ukwazi ukuba, ngokukhuphela i-Autocad 2013 Course ngaphandle kwee-cd ezimbini, iibhloko kunye nokuzivocavoca, ngaba iquka iincwadi ze-400 zedijithali?
Ngaba banesitokweni xa umyalelo wam ukhulu, ukusuka kwi-50 ukuya kwii-200 ikopi?
Isekelwe kwi-AutoCAD 2013, ngokuqinisekileyo ngokuhlaziywa kwekhosi ye-2012.
Iividiyo ziphezulu kwisisombululo esiphezulu
Ndingathanda ukufumana ikhosi epheleleyo ye-autocad 2013 ngevidiyo ze-450 nabanye.
Ndifuna ukwazi ukuba kuyenziwe nge-Autocad 2013 kuba ndibona ukuba izihloko zifana nezinye ikhosi ye-2012.
Ndiya kulihlawula i-Paypal iindleko zeedola ze-30 ukuzikhupha kwi-intanethi.
Kwaye ndifuna ukwazi ukuba banemifanekiso emihle.
Ewe, ukukhuthazwa kuyaqhubeka.
Siyakhathalela ukuba usithumelele i-akhawunti yakho ye-Gmail kwaye usibonise ukuba uyixhomekeke kwi-CloudHQ
UJoseph Raul Berrios uthi:
landela unyuselo lokukhuphela icandelo lokuqala simahla ... ndiyahlangabezana neemfuno
Usengandinika ikhonkco lokukhuphela…?
Landela ukukhuthazwa kwenxalenye yokuqala ngenkululeko .. ??
I-audio yekhosi inesiSpeyin, imiyalelo esetyenziswayo ngesiNgesi, njengoko ilawulwa ngabasebenzisi.
UFernando Carrillo uthi:
Ikhosi eguqulelwe ngayo imiyalelo kwi-autocad esebenzisa, ngesiSpanish okanye ngesiNgesi?
Unokuhlawula ngekhadi lebityala, kodwa asikwazi ukuthetha ukuba unako ukuthetha ngalo, kuya kufuneka uzame.
Ewe, kubandakanya ukuzivocavoca.
Francisco Salgado Rangel uthi:
Sawubona! Ndiyathanda kakhulu ukuthenga le khosi, ngakumbi ngokuyithumela kwidilesi. Kodwa ngaphambi kokuba wenze njalo, ndingathanda ukukubuza ukuba nceda uphendule imibuzo emibini ukuba unomusa kakhulu. I-1 - Kuboniswe ukuba intlawulo ingenziwa ngekhadi lesikweletu. Kodwa ingaba yenziwe nge-Walmart mastercard debit? 2.- Ndiye ndaqwalasela ikhosi, kodwa umbuzo wam Ngaba iquka ukuzivocavoca ukwenza? Ndiyabulela kwaye ndiyathemba kungekudala.
Sawubona uGabriel. Ukuyithenga ilandele ikhonkco eboniswe kwinqaku, hlawula ngekhadi lesikweletu okanye i-PayPal.
Inkqubo ye-AutoCAD ayifakiwe, kodwa unokukhuphela umxholo womfundi http://students.autodesk.com ekhonza wena kwiinyanga ze-36.
Ndithumelele amanyathelo okumele ndilandele ukuwuthenga, ndihlala eUnited States kwilizwe laseTexas ukuba ngacacise ngakumbi, ndingathanda ukwazi ukuba i-autocad ifakiwe ukuyifaka kwikhompyutha
Andizange ndiyiphendule impendulo yakho, ndiyithumele kum, nceda.
Inyaniso kukuba andinguye eMexico, kodwa ndinokulinganisela eMexico kwaye ndifuna ukuhlawula loo nto, uthenge umzimba, thumela mna, ndinomdla kuninzi, kwaye ngelixa ndifumana umkhiqizo othabathayo, ungithumela iifowuni zokulanda zee modyuli, ndicinga ukuba ziyi-8? ukuhamba ukuyihlolisisa.
Ndiyabulela kwangaphambili ukuqonda kwakho.
Kakade unako ukuhlawula ngaloo ndlela. Sithumele ulwazi kwi-imeyili yakho.
Ukuba uhlala eMexico, andiyikuboni ukuba uyayifuna inguqulo ekhutshweyo, kuba iya kufika engaphantsi kweveki.
Kodwa sinokukufikelela ukuze uhlolisise i-intanethi.
Kungenxa yokuba kuthi ukukhutshelwa kwindleko kuba inkonzo ehlawulwayo.
Ndiyomdla ekuthengeni ikhosi, kodwa andiyazi ukuba mhlawumbi ndingakuhlawula nge-mercadopago de mexico, ndinayo ibhalansi apho kwaye ndingathanda ukuyisebenzisa.
Ukuba ndithenga into ebonakalayo, ngaba ungathumela kwakhona inguqu ekhutshweyo xa umkhiqizo ufika? Ngokuqinisekileyo bekuya kuba yintengo yenguqu ebonakalayo ndiyicinga.
Ndiyabulela kwangaphambili impendulo yakho.
Bobabini isicatshulwa kunye nesandi sala mavidiyo aseSpain.
NDIYAVUMA UKUBA KUFUNEKA, NGAKHO UKUBHALISWA KWAMI: IIMVIDEOS NOKUBHOKA KWENKCUKACHA YENKQUBO YENZIWA KWI-SPANISH OKANYE ISIXHOSA INVIRONMENT?
Njengoko ubonile imiyalelo engezantsi kwinqaku, izahluko ze-4 zokuqala zecandelo lokuqala zikhululekile.
Yenza i-akhawunti yeDropbox, ukuba ungenayo enye, vula enye.
Bhalisa kwi-CloudHQ uze unxulumane ne-Google Drayivu kunye ne-Dropbox akhawunti
Jorge Escoda Escoda uthi:
Yintoni isifundo sokuqala sokufunda?
Ndikulungele ukwenza ikhosi kodwa, ukuba ikhululekile.
Sithumele ulwazi kwi-imeyili yakho
VICTOR VASQUEZ uthi:
Mna victor Vasquez uMyili ngemizobo kunye uMyili Web necesiti ukufunda okuzenzekelayo Cad 13 kuba ndikhe ndabona kwi kwimarike wokuthengiswa kakhulu kwaye yinkqubo iluncedo kakhulu. Ndingathanda ukuthenga i-albhamu incwadi kunye neevidiyo. Isizathu soku kukuba ngenxa yokuba andifuni ukubuyela ngoko akwaziyo AutoCAD. Ndiyazi ukuba unako similarlo kakuhle. ndiyayithanda andiyi kuba yingxaki kakhulu kuba asebenzise iinkqubo eziliqela ezifana Illustrator, Ngo-Design, Quarxexprees 8, fireword, Photoshop, Ngaba sicela uthumele iinkcukacha ukuba bathenge nokufunda.
Iidola ze-29.99 zilingana ne-128.74 Bolivares.
Ukuba uthenge ngeposi, i-34.99 dollar ilingana ne-150.20
Ixabiso kwii-bolivares ezinamandla ziya kuba njani? Ndibukele iividiyo zakho kwaye zibalaseleyo. Ukubulisa
Imagazini ye-Yakoekly digital ye-freeekly malunga ne-UFOs, i-parapsychology, i-esotericism, imiphakathi. Iquka izifundo ezininzi zamahhala kunye neentlawulo, ukukhuphela kweencwadi, ii-audios kunye namavidiyo.